SONATA-CANTATA: ဘလော့ဂ် တာ...(၁)
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုဧရာနဲ့ မသီတာတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိ ဘလော့ဂ်လေးရဲ့ ရာပြည့်မှသည် ထောင်သောင်းတိုင် အတွေးအမြင်များ ဖလှယ်ရင်း..အဲ..ရှယ်များကို ရှယ်ရင်း.. ဆက်လက် ချီတက်နိုင်ပါစေလို့။
သီတာတို့ကိုတော့ အားကျမိပါရဲ့။ မောင် တစ်ပို့စ် မယ် တစ်ပို့စ်ပဲ။ တို့များတော့ ကိုယ့်ပို့စ်ကို သူ့မေးလ်ထဲ အရောက်ထည့်ပေးနေရတယ်။ :(
ကိုဧရာနဲ့ မသီတာတို့ ဘလော့ရာပြည့်မှ ဆထက်တံပိုး စာကောင်းပေမွန်များ ဆက်လက် ဖန်တီး တင်ပြနိုင်ပါစေလို့ ... ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ မtg ရယ်။ ဖြစ်လာမှာပေါ့..း)
ကိုဧရာနဲ့ မသီတာရေ.. ဖတ်လို့လည်းကောင်းပါတယ်။ ချီးလည်းချီးကျူးပါတယ်။ အော်.. လက်ဆောင်လေးကို အသိအမှတ်ပြုလို့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲနော်..း)
ပို့စ် ရာပြည့်မှ ထောင်၊ သောင်း အထိ
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ.........။
ဗေဒါလိုပဲ ဆန္ဒပြုပါတယ် ကိုဧရာနဲ့ မသီတာ :)
လူတယောက်ရေးတဲ့စာမှာ... စေတနာကို... တွေ့ရပါတယ်... ခံစားရပါတယ်...
စာကိုမြင်ရတဲ့အခါ... အဲလူရဲ့ နှလုံးသားကို... ထိတွေ့ရသလိုပါပဲ...
ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို... ခံစားရတယ်-လို့... ယုံကြည်ပါတယ်။
လက်တွဲ ညီတဲ့ မောင်မယ် ဘ၀မျိုးကို... ဘလော်ဂါအားလုံး... လိုချင်ကြတာပါပဲ...။
ကျနော်က... အဲလို မောင်နှံတွေကို အားကျနေတာ...။
Wish you Merry X'Mas &
တစ်နှစ်လည်း ပြည့်၊ ပို့စ်တစ်ရာလည်း ပြည့် ပျော်စရာကြီး။ ကျွန်မရဲ့ ဆရာဟောင်း စိတ်ရောဂါ ပါရဂူကြီး တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ သူ ဘယ်တော့မှ စာမရေးဘူးတဲ့။ (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့စာကို ဆိုလိုတာပါ) ကိုယ့်အကြောင်းတွေ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လူသိကုန်မှာမို့ အ၀တ်မပါပဲ လမ်းပေါ်ထွက်သလို ခံစားမိလို့တဲ့။ ရယ်လည်း ရယ်ရတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေ နှမျောစရာလို့ တွေးမိပေမယ့် သူ့ခံယူချက်နဲ့ သူပဲလေ။
ကျွန်မအမြင်ကတော့ ဘယ်လောက်ပြောလဲ၊ ဘယ်လိုပြောလဲ၊ ဘာအတွက်ပြောလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဟာ အဓိကအားဖြင့် ရေးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသူရော ဖတ်သူပါ အကျိုးရှိရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ မတူတဲ့အမြင်တွေကို ပွင့်လင်းပျူငှာစွာ ဖလှယ်နိုင်ခြင်းက တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ သုတပဲဖြစ်ဖြစ် ရသပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေးချင်တာတွေကို ရေးချင်တဲ့အချိန်မှာ ရေးချင်သလောက် ရေးပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးနေကြမယ့် အပေါင်းအသင်းတွေ ရှိပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပြည့်ဝနိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြည့်ဝပါစေရှင်။
ဒါနဲ့ ကျွန်မနဲ့ တူတာက ဘာကောင်တာမထည့်မထားချင်တာပဲ။ စာဖတ်သူကို ကိုယ်ကစောင့်ကြည့်နေသလိုခံစားရပြီးလွတ်လပ်စွာ
မဖတ်ရဲတော့မှာစိုးလို့ ပါ။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်လုပ်တတ်တာချင်းပါတူတာပေါ့လေ။
အိမ်က မောင်ရင်ကတော့ ဘလော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးထားတာ။ အမှန်တရားရှာဖွေခြင်း ဆိုတဲ့နာမည်ကို ရှမ်း
အသံထွက်နဲ့ ရေးပြီးနာမည်ပေးထားတာလေ။ ဘာပို့ စ်မှလည်းရေးတာမတွေ့ မိပါဘူး။ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ပါစေလို့ နော်
တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဗဟုသုတတွေပေးဝေတာမို့ အမတို့ဘလော့လေးက ကြည်နူးစရာပါ..။
ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေစွာ ဆက်လက် ဘလော့ဂ်နိုင်ပါစေ။
Sai Thi Ha said...
I usually read your blog " sonata cantata " and like it.I wish the " sonata cantata " all the best and possess the universal truth of the nature.
I usually read the "sonata cantata" blog and like it.I wish the "sonata cantata" creators all the best and possess the universal truth of the nature.
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဆက်လက် Blogging နိုင်ပါစေ။
အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းက တန်ဖိုး ကြီးတာမို့ ဆက်လက် အားပေးလျက်ပါ။
ဘာရယ်မဟုတ်လား..ဘာရယ်ဟုတ်လားတော့မသိ.. သူ့အတိုင်းသွားနေတဲ့..ရေစီးကြောင်းကြီးတခုမှာ.. အရိပ်တွေ..တွေ့ကြ..ခင်ကြ..လေးစားကြ.. ဝေဖန်ထောက်ပြကြ.. ပျော်လဲ ပျော်ကြပေါ့။
လူဆိုတာရဲ့..အတွင်းသဘောကိုလဲ..ဒီစာတွေပေါ်မှာပဲ..အရိပ်တွေအဖြစ် ထပ်တွေ့..စေတနာတွေလဲပါ..ခံစားချက်တွေလဲ အံကျ.. အပြစ်အနာလေးတွေလဲ..မလွတ်..။
တကယ်တော့.. ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ကို ဘလော့နဲ့ဖြတ်သန်းကြည့်ခြင်း ပေါ့။ ရိုးရိုးတွေး.လိုက်...ပေါ့ပေါ့ရေး..လိုက်.. အကာပါးလေး ဖုံးလိုက်.. စကားလုံးလေးတွေ ညွန့်လိုက်။
တကယ်တော့.. ဘလော့တွေကနေ..လူတွေကို မြင်နေ ဖတ်နေ..သိနေရတာ..တကယ့် ပဉ္စလက် ကြီး တခုပါပဲ။
အခုမှကော်မန့်ပေးဖြစ်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေအများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။ အတွဲညီလို့ အားကျလိုက်တာ။
ရာပြည့်မှသည်ထောင်သောင်းဆီသို့ လက်တွဲအတူ ဝေမျှသူတွေဖြစ်ပါစေ။
ဆောရီးပါ... ရောက်လာတာ တော်တော်တောင် နောက်ကျနေပြီနော်။ တစ်နေ့ လုံး ချာချာလည်ရှုပ်ထွေး ပွေလီနေလို့ ပါ...
လူ့ ဘ၀ရဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ရှေ့ နားက ပါနေတဲ့ မောဟ ဥခွံထဲကနေ ကြိုးစားပြီး တိုးထွက်ကြည့်မယ်။ ဦးခေါင်းလေး စထွက်မယ်။ ဖြေးဖြေးချင်း ကိုယ်လုံးလေး ထိုးထွက်မယ်။ တနေ့မှာတော့ ကျေနပ်လောက်တဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်းကို ရရှိမယ်လို့ ထပ်တူ မျှော်လင့်ယုံကြည်ရင်း…
ကိုဧရာ မသီတာ ရဲ့ပိုစ့် ၁၀၀ မြောက် ရွှေရတုမှသည်... နောင် ပိုစ့်ပေါင်း ရာ ထောင် သောင်းတိုင် တွေးနိုင်၊ ရေးနိုင်၊ မျှဝေ ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်...
အမကတော့ ဘလော့ဆိုတာ မျှဝေရာ လဲ ဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်..
ဘယ်သူမှ လာမဖတ်ဘူးဆိုလဲ ရေးချင်စိတ်ရှိရင် မှတ်တမ်းလေးတခုအဖြစ် တင်ထားချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးနေဦးမှာပါပဲ..
တခုပဲ ရှိတယ် ကိုယ့်စိတ်ကိုတော့ အလွှမ်းမိုး မခံချင်ဘူးပေါ့.. ဒီလောက်လေးပါပဲနော်...
ကိုဧရာ မသီတာ တို့လဲခုလိုပဲ ဆက်လက်ဘလော့နိုင်ပါစေသော်ဝ်....